» देशभर २० हजार पुरुष वेश्या, एकपटक यौनसम्पर्क गरेको २५ हजार !
देशभर २० हजार पुरुष वेश्या, एकपटक यौनसम्पर्क गरेको २५ हजार !
४ जेष्ठ २०७६, शनिबार २०:३१
नेपालमा २ लाख यौन व्यवसायी छन् । जसमध्ये १० प्रतिशत अर्थात् २० हजार पुरुष यौन व्यवसायी रहेको सरकारी तथा विभिन्न सामाजिक संघसंस्थाको अध्ययनले देखाएको छ । बाँकी महिला, तेस्रोलिंगी र समलिंगी यौन व्यवसायी रहेका छन् । पुरुष यौन व्यवसायीबारे नेपाली समाज प्रायः अनविज्ञ भए पनि महिलाको यौन सन्तुष्टि पूरा गरिदिएबापत हजारौँ रकम लिने पुरुष यौन व्यवसायी ठूलो संख्यामा रहेको खुलासा भएको छ ।
नेपालमा रहेका २० हजार पुरुष यौन व्यवसायीमध्ये करिब ५० प्रतिशत पुरुष यौन व्यवसायी काठमाडौं केन्द्रित छन् । तीबाहेक अन्य पुरुष यौन व्यवसायी मोफसलका व्यस्त सहर तथा बोर्डरका बजारमा छन् । पुरुष यौन व्यवसायीका ग्राहक उच्च घरानादेखि उच्च ओहोदासम्ममा पुगेका केही महिला रहेको अध्ययनले देखाएको छ । लाहुरे जीवनको क्रममा विभिन्न मुलुकमा पुगेका पुरुषका श्रीमती, धनाढ्य वर्गका महिला, वैदेशिक रोजगारमा रहेका पुरुषका श्रीमती, श्रीमान्ले छाडेका महिला पुरुष यौन व्यवसायीका दरिलो ग्राहक हुन् । पुरुष यौन व्यवसायीलाई कतिपय महिलाले घरमै बोलाएर तथा कतिपयले क्यासिनो, लक्जरियस होटेल तथा सुरक्षित स्थलमा बोलाएर यौन सन्तुष्टि लिने गरेका छन् ।
पुरुष यौन व्यवसायीका ग्राहक आर्थिक रूपमा सम्पन्न परिवारका हुने भएकाले उनीहरूले अन्य सेवासुविधासमेत पाउने गर्छन् । केही पुरुष यौन व्यवसायीको भनाइअनुसार उनीहरूलाई आवश्यक पर्ने पकेट र मोबाइल खर्चदेखि सपिङका लागि पैसा समेत महिला ग्राहकले दिने गरेका छन् ।
जापान जानका लागि गुल्मीका रोहन ९नाम परिवर्तन० ले गाउँघरमा भएको पाखोबारी धरौटीमा राखेर जेनतेन १५ लाख ऋण निकाले । उनले दलालमार्फत सबै कागजी प्रक्रिया पूरा गरे । दलालकै लहलहैमा जापान जाने भन्दै १५ लाख ऋण लिई आफ्नी वृद्ध तथा मुटुरोगी आमा छोडेर उनी काठमाडौँ हुँदै भारतको दिल्ली पुगे ।
जापान लैजाने प्रलोभन देखाउने दलाल त्यहाँबाट सम्पर्कविहीन भएपछि ती गुल्मेली युवक अन्ततः काठमाडौँ फर्किए । गाउँघरमा जापान जान्छु भनेर हिँडेका ती युवक समाजले हँसिमजाक गर्ने र १५ लाख रुपैयाँ ऋण कसरी तिर्ने भन्ने सोचेर गाउँ फर्किएनन् । उनी काठमाडौँकै माछापोखरी क्षेत्रमा लुकेर बसे । जापानका विभिन्न सहरका फोटोमा फोटोसपमार्फत मिलाएर आफ्नो फोटो पोस्ट गर्दै आफू जापानमा रहेको जानकारी साथी तथा आफन्तलाई फेसबुकमार्फत गराए । यसो गर्नुको पछाडि आफू जापानमै रहेको खबर मुटुरोगी आमाले थाहा पाउन् र छोराले कमाउनेछ भन्नेमा ढुक्क होउन् भन्ने थियो । अर्कोतर्फ ऋणले उनको मन भतभती पोलिरहेको थियो ।
डिग्री पढ्दै गर्दा छाडेर जापान जाने सपना बुनेका र अन्त्यमा काठमाडौा माछापोखरी, नयाँबसपार्क क्षेत्रमा बस्न थालेका ती युवकले पैसा कमाउने उपाय सोच्न थाले । त्यसपछि उनी महिला यौनकर्मीको सम्पर्कमार्फत ग्राहक खोज्न थाले । महिला यौनकर्मीमार्फत उनले पुरुष यौनकर्मी पनि हुन्छन्, उनीहरूले हजारौँ लिएर महिलाको यौन आवश्यकता पूरा गरिदिन्छन् भन्ने थाहा पाए । त्यसपछि पुरुष यौन व्यवसायीको भिडमा उनी पनि ग्राहक खोज्न थाले ।
सिन्धुपाल्चोक ज्यामिरेका पदम ९नाम परिवर्तन० कुनै समय माओवादी लडाकु बनेर युद्धमा होमिएका थिए । पछि सेना समायोजनका क्रममा अयोग्य घोषित भएपछि विरक्तिएर काठमाडांैै आए । त्यसपछि नाङ्लो पसल चलाउँदा–चलाउँदै उनी यौनकर्मी महिलाको संगतमा पुगे र पैसा तिरेर यौन सन्तुष्टि पूरा गराउने महिला पनि हुन्छन् भन्ने थाहा पाए । अनि उनी पनि यौन व्यवसायी बने । तीनजना छोराछोरीका बाबुसमेत रहेका पदमले अहिले धनाढ्य परिवारका महिलालाई यौन सन्तुष्टि दिन्छन् । यौन व्यवसायबाट अहिले उनले लाखौँ सम्पत्ति जोडेका छन् ।
करिब १५ वर्षअघि काठमाडौँको एक रेस्टुरेन्टमा भाँडा माझ्ने कामदारका रूपमा छिरेका १३–१४ वर्षीय बालक अहिलेका खुंखार पुरुष यौन व्यवसायी बनेका छन् । द्वन्द्वकालमा माओवादीले आफूहरूसँग हिँडाउन खोजेपछि मुस्किलले उदयपुर घरबाट भागेर काठमाडौँ आएका तामाङ थरका ती किशोरले केही समय भाँडा नै माझिरहे । पछि उनी किशोरावस्थाबाट वयस्क हुँदै गए, त्यसपछि उनी पुरुष यौन व्यवसायी बने ।
काठमाडौँको मैतीदेवीमा डेरा गरी बस्ने एकजना मंगोलियन अनुहारका युवा बिहानै उठेर काजु, बदाम तथा दूधजस्ता पौष्टिक आहार खान्छन् । हट्टाकट्टा, खाइलाग्दा ज्यानका उनी जिम धाउँछन् र महँगा कपडा पहिरिएर शरीरमा सेन्ट छर्किएर नित्यकर्ममा निस्कन्छन् । उनको नित्यकर्म आफ्नो सम्पर्कमा रहेका करिब आधा दर्जन महिलाको यौन चाहना पूरा गर्नु हो । उनी जाँडरक्सी, चुरोट केही सेवन गर्दैनन् । उनलाई पुरुष यौन व्यवसायी हुन् भनेर पत्याउन गाह्रो हुन्छ । तर, उनको वास्तविक दिनचर्या भनेको महिलाको यौन सन्तुष्टि पूरा गरिदिने र पारिश्रमिक लिने हो ।
विदेशी पुरुष यौनकर्मी ठमेलमा छ्याप्छ्याप्ती
सागर रोक्का ९नाम परिवर्तन०ले सुदूरपश्चिमबाट आएर ठमेलको एक होटेलमा ग्राहक खोज्न थालेको करिब ३ वर्ष भयो । उनी विदेशी गेस्टहरूसँग दिनहुँ सम्पर्कमा रहन्छन् । भारत, पाकिस्तान, चीनलगायत विभिन्न मुलुकबाट आएका पर्यटकमध्ये अधिकांश पर्यटकले नेपाली महिलासँग यौनसम्पर्क राख्ने इच्छा व्यक्त गर्छन् । सोक्रममा सागरले एक रातको १० हजार रुपैयाँसम्म आफ्नो पारिश्रमिक तोक्ने नेपाली युवती मिलाइदिन्छन् । जसमार्फत सागरले कमिसन पाउँछन् । यसरी सागरजस्ता धेरै पुरुष यौन दलाली काठमाडौँका ठमेल, नयाँ बसपार्क, रत्नपार्कलगायतका क्षेत्रमा हुने उनी बताउँछन् । एउटा ग्राहक खोजिदिएबापत महिला यौन व्यवसायीले उनीहरूलाई २ सयदेखि ५ हजार रुपैयाँसम्म दिने गरेका छन् ।
काठमाडौँमा २ हजार बालिका यौन व्यवसायमा
काठमाडौँ उपत्यकामा २ हजारभन्दा बढी बालिका यौन व्यवसायमा संलग्न रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ । बालयौन शोषणबारे एकीकृत तथ्यांक अभावका कारण यो संख्या अझ बढी हुन सक्ने सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधि बताउँछन् । डान्सबार, रेस्टुरेन्ट, क्याबिन रेस्टुरेन्ट, दोहोरी रेस्टुरेन्ट, भट्टीपसल, खाजाघर, केही चियापसल र मसाज पार्लरलाई वयस्कले मनोरञ्जन गर्ने स्थल भन्ने गरिन्छ । सो स्थानमा ११ देखि १३ हजार महिला कार्यरत छन् । त्यसमध्ये १८ वर्षमुनिका एकतिहाइ बालिका रहेको अनुमान छ ।
मोडल यौनकर्मीको माग धेरै
कस्तो हुन्छ सञ्जाल